3 ruux oo ajaanib ah oo lagu xiray magaalada kisumu – The Voice of Northeastern Kenya
3 ruux oo ajaanib ah oo lagu xiray magaalada kisumu
Booliska magaalada kisumu ayaa waxa ay xireen 3 ruux oo lagu tuhunsan yahay in ay dadka deeganka ka dhaceen lacago malaayin shillin ah.
3 –daas qof oo u kala dhashay waddamada Tanzania iyo Ugandha ayaa waxa magacyadooda lagu kala sheegay Mutegeki Rwekazi,Saduru Isaa Msuruni iyo Najib waxana xiligi 3-daas eedeysane la soo xiraayay lagu soo xiray iyago ku dhuumaleysanaayo xafada Tom Mboya estate ee isla magaaladaas Kisumu.
Joseph Keitany oo ah sarkaalka 2-aad ee ugu sareeyo ciidamada booliska ee magaladaas ayaa waxa u sheegay in 3-da ruux ee eedeysanayaasha ah in ay booliska bacsanaayen oo ay in muddo ahba ku daba jireen.
Waxa u sheegay in bacsiga nimankan ay bilaaben maalinta jimcada ahayd kadib marki ay lacag dhan 1 milyan oo shillinka dalka ah ay ka dhaceen nin lagu magacaabo Robert Matete kaas oo ka hawlgali jiray mid kamid ah bangiyada dalka.
3-da ruux ee eedeysanayaasha ah ayaa ugu dambeynti la soo xiray maalinta shalay ahayd sacada marka ay ahayd 5-ta galabnimo kadib marki ay ciidamada booliska ay xog ku aadan halka ay nimankan ku dhuumaleysanaayen ay ka heleen dadweynaha.
Nimankan eedeysanaayaasha ah ayaa la sheegaya in ay dadka lacagaha kaga dhacaayen in ay ducooyin u sameeyn doonan waxana ay ahayd maalinta jimcada aanu soo dhaafnay marka booliska ay heleen lacag dhan 4 milyan oo shillinka dalka ah kaas oo ay ka qaaten Mr Matete kadib marki ay u sheegen in ay duca qaas ah oo u shaqo iyo xaskiisa dib ugu heli doono ay u sameyn doonan.
Matete oo ka hawlgali jiray mid kamid ah bangiyada dalka ayaa xaskiisa lumiyay kadib marki shaqada laga eryay.
← Ciidamada Turkiga oo bartilmaamedsanaya dagalyahanada Kurdish ee ku sugan Jarablus
Macaalimiinta countiga Kwale oo sheegay in aysan ku faraxsaneyn qabka xukumadda Jubilee ay wax u wado →